" Sh. Umal Shalay wuxuu nagu xakumay Riddo haddana Kismaayo oo Itoobiyaan heysto ayuu ...." sidaas waxaa yiri. - Caasimada Online
Home Warar ” Sh. Umal Shalay wuxuu nagu xakumay Riddo haddana Kismaayo oo Itoobiyaan...
” Sh. Umal Shalay wuxuu nagu xakumay Riddo haddana Kismaayo oo Itoobiyaan heysto ayuu ….” sidaas waxaa yiri.
Kismaayo (Caasimadda Online) – Col. Aadan Rufle oo kamid ah saraakiisha dowladda federalka ah ee Gedo ayaa sheegay in bulshada ku dhaqan magaalooyinka ay joogaan ay yihiin kuwa qaba dhibaatooyin badan.
“Sheekh Bashiir anigu nimaan aqaano ma ahan laakin Sheekh Umal iyo qolada la fatwoota waxaan u aqaanaa culimada cadiifadda qabiilkooda u fatwoota” ayuu yiri Rufle, isagoo ku eedeeyay in 2008 uu ciidamadii amxaaro kalkaalka ee Kismaayo laga saaray ku xukumay Rido, haddana uu isagii Kismaayo ka dhisanayo guryo uu ku sheegay sharci darro xilli waliba ay magaalada joogaan ciidamo Itoobiyaan iyo kuwa Kenyaati ah.
Sheekh Umal ayaa dhawaan dhagax dhigay dhul uu muran ka taagan yahay oo ku yaalla magaalada Kismaayo, dhulkaasoo sida uu sheegay uu ka iibsaday dadkii gacanta ku hayay waagii dowladda iyo burburkeedii kadib.